ဂျီဘရောလ် Nonresident ကုမ္ပဏီများနှင့် Corporation
ဂျီဘရောလ်ဗြိတိသျှသရဖူတစ်ခုမှီခိုသည်။ ဒါဟာဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဂျူရီသည်ဤအရေးအသား၏အဖြစ်ကိုထုတ်မပေးသော်လည်းဤ Brexit ကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
ဂျီဘရောလ်အထူးသအီးယူဥပဒေပြုသုံးခုဒေသများ၏ applications များမှဖယ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် - ဘုံစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ, အကောက်ခွန်ပြည်ထောင်စုနှင့်တန်ဖိုးအခွန်စည်းမျဉ်းများကဆက်ပြောသည်။ အဆိုပါအားလုံးသည်အခြားအရှုထောင့် EU ဥပဒေပြုဂျီဘရောလ်အတွက်သက်ဆိုင်ဖြစ်ကြသည်။ ဗြိတိန် / EU ကအုပ်စုခွဲစဉ်အတွင်း Gibraltarians နီးပါး 96% ဥရောပသမဂ္ဂအတွက်ဆက်လက်ရှိနေရန်မဲပေးခဲ့သည်။
စီမံခန့်ခွဲမှု, ဘဏ်လုပ်ငန်း, အာမခံလုပ်ငန်းနဲ့ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှု။ ဒီအမြင့်မား
OECD ၏ဘဏ္ဍာရေးလှုပ်ရှားမှု Task ကိုများကဲ့သို့အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ကမ်းလွန်စင်တာများ
ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း, ဂျီဘရောလ်ထုတ်ဖော်ပြောဆို (၎င်း၏ကတိကဝတ်အတွက်ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်နေဆဲ
ဂျီဘရောလ်အတွက်ဥပဒေစနစ်အလွန် UK ရှိကြောင်းနှင့်တူ၏။ Gibraltarians အင်္ဂလန်၏ဘုံဥပဒေအပေါ်ကိုသူတို့ဥပဒေများကိုအခြေခံထားပါသည်။
အမျိုးမျိုးသောလိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီ။ non-နေထိုင်သူကုမ္ပဏီ, ကင်းလွတ်ခွင့်ကုမ္ပဏီ,
တစ်ဦးချင်းစီအဘို့အစီအစဉ်ကိုခေတ်သစ်အပေါငျးတို့သဖြစ်နိုင်သောလိုအပ်ချက်များအတွက်ကု သ. မရသော
ဂျီဘရောလ်အခွန် Haven ကောင်းကျိုးများ
1 ။ တစ်ဦးက Non-နေထိုင်သူကုမ္ပဏီဂျီဘရောလ်ကနေလုံးဝကင်းလွတ်စေခြင်းငှါ
ဂျီဘရောလ်၏ Nonresidents ဟာ IBC ပိုင်ဆိုင်ရပေမည်။
2 ။ ဂျီဘရောလ်မဆိုတစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခုနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမနှစ်ဆအခွန်စာချုပ်ရှိပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုဆိုလိုဂျီဘရောလ်ကိုမဆိုအခွန်အာဏာပိုင်နှင့်အတူမည်သည့်ကုန်သွယ်မှုသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များဝေမျှမည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူကပြောပါတယ်ခံရကျနော်တို့နေဆဲဖြစ်သောသင်တို့ကိုတာဝန်ရှိသည်ဟုနေကြသည်အဲဒီအေဂျင်စီများနှင့်အတူအပြည့်အဝအခွန်လိုက်နာမှုအကြံပြုပါသည်။
3 ။ ဘဏ်လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်ဥပဒေဖြင့်ပြဌာန်းထားသည်။
ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့စာရွက်စာတမ်း Apostilization (အဖွင့်နေတဲ့အဘို့လိုအပ်
နှစ်ပတ်လည်ပြန်သွား၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်ဖိုင်အားလုံးပါဝင်နိုင်လိုအပ်သောဂျီဘရောလ်နေထိုင်သူအတွင်းရေးမှူးတို့ပါဝင်သည် - ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲမှု client ကိုပေးလျှင်။
တစ်ဦးဂျီဘရောလ်ကုမ္ပဏီထည့်သွင်းပုံမှန်အား4စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်6ကြာပါသည်။ ဒါဟာအချိန်ကို process မှကုမ်ပဏီမြား၏မှတ်ပုံတင်အားဖြင့်လိုအပ်ပါသည်
အမိန့်။ အရှိန်မြှင့်ပြီးမှတ်ပုံတင်ဝန်ဆောင်မှုအပိုမှာမရရှိနိုင်ပါက "လာမယ့်နေ့"
GBP 100 ၏ကုန်ကျစရိတ်။ အပိုဆောင်းစာရွက်စာတမ်းလက်မှတ် (Notary နှင့် / သို့မဟုတ် Apostille) may
4 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းတစ်ခုထပ်တိုး6ယူပါ။ အချိန်အတိအကျပမာဏကိုစာရွက်စာတမ်းများအတည်ပြုသောအေဂျင်စီများအပျေါလောလောဆယ်တွင်မည်မျှတစ်ပမာဏ၏မူတည်ပါသည်။
နှစျခုကုမ္ပဏီအမည်ကိုရွေးချယ်မှု။ ဥရောပ, တော်ဝင်မိသားစု, နိုင်ငံတကာ, အသင်းအဖွဲ့, ဘဏ်, အုပ်စုတစု, ယုံကြည်မှု, အာမခံနှင့်အာမခံချက်ကိုအောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်ခွင့်မပြုစကားပေတည်း။
ဒါရိုက်တာနှင့်ရှယ်ယာရှင်အသေးစိတ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီများ Registry ကိုကအများပြည်သူဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖြစ်ပါသည်, ဤမှတ်တမ်းတင်ဒါကြောင့်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကျနော်တို့ပိုင်ရှင်တွေ '' လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်ခါတင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်ရှယ်ယာရှင်များပေးနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေချုပ် (POA) ၏တစ်ဦးကပါဝါတစ်ဦးအနေဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်
အစစ်အမှန်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လျာထားသောဒါရိုက်တာ။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနေနဲ့နောက်ထပ်အခကြေးငွေများအတွက် notarized အထွေထွေ POA ပေးနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များ, ဒါရိုက်တာများနှင့်အသေးစိတ်ပါရှိသည်ရသော Registry ကို
ဂျီဘရောလ်ကုမ္ပဏီများမှလည်းအကောင့်အသစ်များ၏ထုတ်ပြန်ချက်များ file ရန်လိုအပ်သည်
(အများပြည်သူစံချိန်အပေါ်) ကို Registry ကိုမှာ (အမြတ်နှင့်အရှုံး Balance စာရွက်များ) ။
စာရင်းစစ်ဆေးရဤ Balance စာရွက်များအဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
သငျသညျ (က Man ၏ကျွန်း, လီချင်စတိန်းနှင့် Channel ကိုကျွန်းများအပါအဝင်) ဥရောပကမ်းလွန်စင်တာများကြိုက်နှစ်သက်မှဂျီဘရောလ်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသင်ဂျီဘရောလ်အရှိဆုံးကြောင်းမြင်ရပါလိမ့်မည်
တတ်နိုင် option ကို။ Plus အားသူတို့ကမ်းလွန်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးမှဆက်ကပ်အပ်နှံထားရှိပါသည်။ ဂျီဘရောလ်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏တတ်နိုင်လိုလိုလားလားကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်မဆိုအခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှနှိုင်းယှဉ်။ ဒါဟာသိပ်ထားတဲ့ကမ်းလွန် entity အဖြစ်ဆည်းကပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု-ဖော်ရွေစည်းမျဉ်းများနှင့်ပြဌာန်းချက်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကပြောသည်ခံရကြောင်း, တစ်ဦးဂျီဘရောလ် nonresident ကုမ္ပဏီဖွယ်ရှိဥရောပတိုက်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးမရရှိနိုင်ပါဆုံးကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောကမ်းလွန်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ထိုနည်းတူစွာ, ကဘေလီဇ်, BVI, အကေမန်ကျွန်းစုများနှင့်အခြားလူသိကမ်းလွန်ဘဏ္ဍာရေးစင်တာများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်သည်။
တစ်ဦး certified ရရှိထားပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ (သို့မဟုတ်အလားတူ ID ကို) လိုအပ်သည်။
လိပ်စာစာရွက်စာတမ်းများအထောက်အထားတစ်စုံတစ်ရာညွှန်ပြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အမည်နှင့်အိမ်လိပ်စာပြသဆိုမကြာသေးမီကပေးစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခု utility ကိုဥပဒေကြမ်း, ကြိုးဖုန်းဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်း, ဘဏ်ကြေညာချက်, ခရက်ဒစ်ကဒ်ကြေညာချက်သို့မဟုတ်နဲ့တူလောက်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ကြသည်။
သငျသညျဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်လျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။ သငျသညျခရက်ဒစ်ကတ်နံပါတ်ပေးနိုင်ပါသည်, ပြီးတော့ငါတို့သည်သင်တို့အရေးအသားအတွက်အတည်ပြုတစ်ခုအီလက်ထရောနစ်ငွေတောင်းခံလွှာပေးပို့။ အဆိုပါအခကြေးငွေကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါကျွန်တော်ဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။